'सबै खोपको साइड इफेक्ट हुन्छ'
मुख्य पृष्ठविदेश समाचार स्वास्थ्य‘सबै खोपको साइड इफेक्ट हुन्छ’
‘सबै खोपको साइड इफेक्ट हुन्छ’
विराटनगर/कुनै पनि खोपको सुरक्षाबारे कुरा गर्दा हजारमा एक भन्ने तथ्यांकको विवरण बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।
बेलायतमा कोरोना भाइरस महामारी अवधिमा प्रतिहजार जनसंख्यामा एक जना मानिसको मृत्यु भएको छ । रोगबाट आउने सक्ने यस्ता जोखिमका बारेमा सर्तकता अपनाउँदै परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
चिकित्सा क्षेत्रमा ‘सुरक्षा’ र ‘हानिरहित’ र ‘जोखिम’ र केही ‘जोखिमयुक्त’ बीच महत्वपूर्ण भिन्नता रहेको छ । केही समयअघि बेलायतले पनि फाइजर/बायोएनटेक भ्याक्सिन आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति प्रदान ग¥यो । पहिलो चरणको खोप लगाउने क्रममा खोप लगाएका दुई मानिसहरुमा एलर्जीको समस्या देखियो । जब हामी कोभिड १९ खोपको ‘सुरक्षित प्रयोग’ बारेमा के कुरा गर्दछौैँ, यसको बारेमा हामीले कसरी बुझेका छौँ ?
‘तपाईलाई लाग्न सक्छ कि तपाईले लगाउनु भएको खोपको कुनै साइड इफेक्ट छैन । तर वास्तवमा हरेक खोप/औषधिको केही असर हुन्छ र कुनै पनि औषधि पूर्ण ‘सुरक्षित’ छैन ।’ लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रोपिकल मेडिसिनको प्रोफेसर स्टेफन इभान्सले भने । उनको भनाइअनुसार कुनै पनि प्रयोगमा ल्याएको औषधि वा खोपले पार्ने असर र फाइदाबीचको सन्तुलनको नतिजा सकारात्मक हुनु पर्दछ ।
बेलायतको औषधिनियामक, मेडिसिन एन्ड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजन्सी (एमएचआरए) ले फाइजर/बायोटेक खोपले आवश्यक मापदण्ड पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
तथापि अझै त्यस्ता केही औषधिहरु छन् जसको प्रयोग गर्नाले शरीरमा नकारात्मक असरहरु पार्ने गरेको छ । यस्तो जोखिमको बावजुद पनि यस्ता औषधि प्रयोगका लागि अनुमति दिइएको छ । किनकि यस्ता औषधिले पार्ने असरभन्दा यसबाट आउने सकारात्मक परिणाम महत्वपूर्ण छ । उदाहरणका लागि केमोथेरापी औषधि नकारात्मक प्रभाव पार्ने सूची रहेको छ । यसको प्रयोगवाट थकावट हुने, कपाल झर्ने, एनोमिया, बाझोपन, स्मरण शक्ति हराउने, निद्रानलाग्ने समस्याहरु छन् । तर घातक रोग क्यान्सरको उपचारमा प्रभावकारी भएकाले कसैले पनि यसमा प्रश्न उठाउँदैन र सम्बन्धित बिरामीका लागि प्रयोग गरिन्छ ।
यसरी नै अन्य औषधिहरुको पनि नगन्य साइड इफेक्टहरु छन् । त्यसमध्ये आइब्रुफिन एक औषधि हो जुन सामान्यतया सबैको घरमा राखिने गरिन्छ । अत्यधिक दुखाइ भएको अवस्थामा परामर्शविना मानिसहरुले यसको प्रयोग गर्दछन् । यस्ता औषधिको मनपरि सेवन गर्नाले रक्तश्राव हुने र आन्द्रामा प्वाल बनाउन सक्ने, स्वासप्रस्वासमा समस्या र किड्नीलाई समेत असर पार्न सक्छ । यस्ता औषधिको साइड इफेक्ट हुँदाहुँदै पनि यसले पु¥याउने फाइदाको मूल्यांकन गरी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
‘सुरक्षितको अर्थ शतप्रतिशत भन्ने हुँदैन, तर प्रयोग गर्दा यसले पु¥याउने फाइदाको सन्दर्भमा हुन्छ ।’ प्रोफेसर इभान्सले भने ।
फाइजर/बायोएनटेक खोपको सामान्य असर मात्र
खोप वितरण तथा प्रयोगका लागि नियमन गर्ने संयन्त्र बनेको हुन्छ । यही संयन्त्रमातहतको अनुगमन टोलीले यससँग सम्बन्धित सूचनाहरु प्रवाह गर्ने कार्य गर्दछ । कुनै पनि सम्बन्धित सूचना र तथ्यांकहरु सार्वजनिकरुपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।
यसरी गरिने कार्यमा कुनै लुकाउने कुराहरु हुँदैन । सुरक्षाको सन्दर्भमा कुनै प्रश्नहरु उठेमा यसका नियामकहरुले सम्बन्धित स्थानमा अनुगमन गरी समस्याको सम्बोधन गर्नेछ । खोप निर्माणको समयमा उत्पादक कम्पनीहरुले गरेको प्रयोगशालाको अध्ययन, जनावरमा गरिएको परीक्षण, त्यसपछि मानवमा गरिने तीनै चरणको रिर्पोटहरु नियमन संयन्त्रलाई बुझाएको हुन्छ । ‘यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदन कम्तिमा पनि दश हजार पानाको हुन्छ,’ प्रोफेसर इभान्सले भने ।
फाइजर खोप ९५ प्रतिशतले सफल भएको सार्वजनिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर यसको प्रयोग गर्दा टाउको दुख्ने, जाडो हुने र पाखुरा दुख्ने सामान्य साइड इफेक्टहरु छन् । यस्तो असर १० मध्ये एक जना मानिसमा हुने गर्दछ ।
जब शरीरमा प्रतिरक्षा प्रणालीले काम गर्न सुरु गर्दछ, सामान्यतया यस्ता लक्षणहरु देखा पर्दछ । यस्ता सामान्य समस्याहरु सिटामोल खाएर नै निको हुने गर्दछ ।
किंग्स कलेज लन्डन र फर्मास्युटिकल मेडिसिन संकायका डा. पेनी वार्ड भन्छन्, ‘एमएचआरएसँग धेरै अनुभव छ, यदि उनीहरुले जोखिमभन्दा यसको फाइदा धेरै छ भनिरहको छ भने खोपप्रति हामी विश्वस्त हुनुपर्छ, वास्तवमै शंकाका कुराहरु अन्त्य गरिनु पर्दछ ।’
परीक्षणको परिणाम सकारात्मक नभएका खोपहरुले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने जोखिम उच्च हुन्छ । तर हाल परीक्षण पूरा गरेर ९५ प्रतिशत सफल भएको खोपहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । यसको अर्थ यही हुन्छ कि यी खोपहरु प्रभावकारी र सुरक्षित छन् । हाल सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार २० हजार मानिसमा फाइजर, १५ हजार मानिसमा मोडर्ना र १० हजार मानिसहरुमा अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका खोप लगाइएको थियो । यति मानिसहरुमा गरिएको परीक्षण खोपको प्रभावकारिता र सामान्य समस्याहरु पत्ता लगाउन पर्याप्त हुन्छ ।
ठूलो जनसङ्ख्यामा परीक्षण गरेरमात्र कुनै एक व्यक्तिमा देखिएको साइड इफेक्टबारे बताउन सकिन्छ । ‘लाखौं मानिसको बीचमा परीक्षण नगरी कुनै व्यक्तिमा पर्ने साइड इफेक्टबारे सामान्यीकरण गर्न सक्नुहुन्न,’ डाक्टर वार्डले भने ।
हरेक स्वीकृति दिइएको खोपमा यही सिद्धान्त लागू हुन्छ । कोभिड १९ विरुद्धको खोप सन्दर्भमा पनि यो कुनै नयाँ विषय होइन । एउटा मौसमी फ्लुको खोप लगाउँदा पनि सामान्यतया यसको विभिन्न लक्षणहरु देखापर्ने गर्दछ । यसरी नै कोभिडको खोपमा पनि सामान्य लक्षण देखिनु ठूलो कुरा होइन । यो लगाएको केही दिनपछि देखिएका लक्षणहरु आफैँ हराएर जानेछ ।